Crayons Preschool မှ ရင်သွေးငယ်များအတွက် သင်ကြားပုံ၊ သင်ကြားနည်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...။
၁။ နိုင်ငံတကာ မူကြိုပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ အသုံးပြုထားရှိခြင်း
၂။ ကလေးများ၏ မှတ်တမ်းများ တိုးတက်မှုများကို တလတစ်ကြိမ်ဆွေးနွှေးပေးခြင်း။
၃။ ကလေးများကို စိတ်ရှည်ပြီး ပြည့်ဝသော ဆရာ/ဆရာမများ ထားရှိထားခြင်း
၄။ မူကြိုဘာသာရပ်အပြင် English ဘာသာစကားကို တိကျပြတ်သားရှင်းလင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက် သီးသန့်လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်း
၅။ ကလေးငယ်၏ ပညာရေးသာမက မိသားစုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယုံကြည်မှုရှိစေရန် လေ့ကျင့်ကေးခြင်း။
၆။ ကလေးငယ်၏ အကျင့်စာရိတ္တ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်လည်း အထူးလေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်း
၇။ ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီ အားသာချက်ပေါ်မူတည်ကာ သင်ကြားရေးများ စီစဉ်ပေးခြင်း။
၈။ကလးငယ်တွေအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုရှိစေမှာမဟုတ်ပဲ Play Based များကို အခြေခံကာ သင်ကြားပေးသည့် အပြင် Montessori နည်းများ၊ Teaching aids များဖြင့် အသက်အရွယ်နဲ့ အလိုက်သင်ကြားပေးခြင်း။
အစရှိသည့် လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်းလမ်းအသွယ်သွယ်နှင့် ပြုစုပျိုးထောင်နေ သော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ် ကြောင်း အသိပေးစေလိုပါသည်။
"ကျောင်းမအပ်မှီ အစမ်းထားရက်သက် တပါတ်လည်းရှိသည့် အပြင် မိဘများနှင့် ကလေးမူကြိုပညာရေးအကြောင်းအရာများကို Free Consultation ပြုလုပ်ကာ လမ်းညွှန်မှု များပြုလုပ်ပေးပါသည်။ "
Classes များမှာ -
Toddler Level (2-3 Yrs old)
Nusery (3-4 Yrs old)
Pre-KG (4-5 Yrs old) များဖြစ်ပါတယ်။
အစမ်းထားရက် (Trial Week) = Free
School Fees =120000 Ks
Ferry = စမ်းချောင်း၊ လှည်းတန်း၊ Dagon Centre အနီးတဝှိက် အတွက် ရှိပါသည်။
- Dance and Movement တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Mon to Fri -မနက် (၉)နာရီကနေ ညနေ (၃) နာရီထိ
Extension Hours available.
သက်တောင့်သက်သာရှိသော Aircon စာသင်ခန်းများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းမိဘမျာအတွက် Extension Hours များထားရှိပေးခြင်း။
စာကို ထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ကူညီပေးမယ့် အတွေ့အကြုံရှိပြီး စိတ်ရှည်သော ဆရာမ များ၊ ကလေးများ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ထားရှိပေးထားသော Teaching aids များ။
လုံခြုံစွာ ကစားနိုင်သော Indoor Playground ကလေးများလုံခြုံရေးအတွက်တပ်ဆင်ထားသော CCTV များ ကလေးများ ကျမ်းမာရေးအတွက် နေ့စဉ် အဖျားတိုင်းပေးခြင် နှင့် First aids kit box များထားရှိခြင်း ကလေးမှတ်တမ်းများ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းပေးခြင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
မိဘများအနေနဲ့ မိမိကလေးများ အတွက် အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွှေးနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါကလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
အမှတ် ၁၈ ညောင်တုန်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
source: myanmar kids club
Finding Good Preschool?
အောင်မြင်နေသော ဆရာတိုင်း ကျင့်သုံးလေ့ရှိတဲ့ သင်ကြားပို့ချမှုဆိုင်ရာ ဗျူဟာများ
More in this category: Pre-school နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ »